Sacuudiga oo war culus kasoo saaray Qaraxii lagu hoobtay ee Muqdisho. – Mareeg Online
Waxaa goor dhaw soo gabgaboobay kulan u dhexeey gudoonka barlamanka iyo xisbiyada madasha qaran.
Jubaland ayaa soo saartay war-saxaafadeed ku qoran luqad adag.
Habargidir iyo xawaadle ayaa kulan ka yeeshay sidii loo wada dhisan lahaa dakada hobyo.
Kulan u socda Guddoonka Golaha Shacabka iyo Madasha Xisbiyada
SAWIRRO:-RW Kheyre oo si dhoola tus ah loogu soo dhaweyay Muqdisho
Ra’isulwasare qayre ayaa dalka dib ugu soo laabtay mudo 10 cisho uu ku maqnaa wadanka qadar.
UK, Denmark iyo Netherland ayaa Somaliland la saxeexday heshiis lagu fulinayo afar mashruuc
Xildhibaan si adag uga hadlay Banaan baxii maanta dowlada xooga ku joojisay
Cidamo ka tirsan kuwa militeriga itoobiya ayaa lagu laayay dalkaas itoobiya.
Sacuudiga oo war culus kasoo saaray Qaraxii lagu hoobtay ee Muqdisho.
in Xogta Maanta
Axmed Madoobe oo ka hadlay matalaada G. Banaadir & Muddo kororsi dhaca
Maxkamad lasoo taagay askari dil uu geestay sababay Rabshado ka dhacay Muqdisho
Senataro ka soo horjeestay qoraalkii uu soo saaray Guddoomiyaha Aqalka sare.
Qayb kamid ah war saxaafadeedka laga soo saaray shirkaas ayaa si weyn loogu cambaareeyey weerarkii ay Kooxda Al-Shabaab ka fulisay Muqdisho 28 Bishii December ee sanadkii dhamaaday kaasoo ka dhacay Isgoyska Ex Control ee Afgooye.
“Sacuudiga wuxuu diidan yahay nooc walba oo fowdo xagjirnimo iyo argagixiso ah” ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay shirka Golaha Wasiirada.
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo kulamo kala duwan ka wada Dhuusamareeb
Taliye ciidan, Saraakiil & Askar badan oo xabsiga la dhigay
Soomaaliland oo Maanta diiwaangelisay kiisaskii ugu badnaa ee Coronavirus
Guddoomiyaha degmada Buurdhuubo oo isku day dil ka badbaaday
Galmudug oo Farriin hanjabaad ah u dirtay Ganacsatada lacagaha siiya Shabaab
KASHIFAAD: Farmaajo oo Muqdisho ku xiray Odayaal & Siyaasiyiin taageersan Axmed Madoobe
Maraykanka iyo Ciidamada Puntland oo weeraray Xarun Al-Shabaab ku leeyihiin Bariga
U GURMO CEEL-DHEER
Mareeg Online is an Independent Online News Website that covers all Somali latest news, Breaking news, Views and analysis.
War deg deg ah: xdhibaan xidig oo xoog ku heesta gurga reer caamir tarmuum. fuad caamir ayaa sharaxaya.
© 2020 MO - All about News From Somalia MO.